ISpain inokunyulwa ukuba ibambe i-TMT, eyona iteleskopu inamandla emhlabeni | Iindaba zeGajethi
ISpain inokunyulwa ukuba ibambe i-TMT, eyona iteleskopu inamandla emhlabeni
Kwiminyaka emininzi eyadlulayo, ndicinga ukuba ndiyakhumbula ukuba kwakusekupheleni kuka-2014, xa kwakusenziwa ifayile ye TMT o Imitha engamashumi amathathu yeTeleskopu, iteleskopu enamandla kunazo zonke ezakhe zakhiwa ezaziza kubakho phezulu kwiNtaba iMauna Kea. Ngelishwa, ukusukela oko yaqala iprojekthi, abo banoxanduva lwayo badibana neengxaki ezininzi, kubandakanya nento yokuba le ntaba ithathwa njengengcwele kubemi baseHawaii.
Okwangoku, xelela ukuba le projekthi ingaqala ngombulelo kwinto yokuba iCandelo laseHawaii leMithombo yeNdalo linike imvume yokwakha kuloo ndawo, emva komlo omkhulu wezomthetho yayiyiNkundla ePhakamileyo yaseHawaii ekupheleni kuka-2015 eyaphela rhoxisa imvume yokwakha Oko kuthetha ukuba iprojekthi bekufanele ukuba imisiwe, kude kube ngoku.
I-TMT ekugqibeleni inokufumaneka kwisiqithi saseLa Palma kwiiCanary Islands.
Emva kokurhoxiswa kwamaphepha-mvume okwakha kwaye ngenxa yokuba ukutshata kwe-International Observatory TMT khange kubenakho ukufikelela kwisivumelwano nabemi bendawo, iprojekthi ihleli ivaliwe ukusukela ngo-2014. Njengeenkcukacha, mandikuxelele ukuba uthetha nge Utyalo-mali lwe-1.400 yezigidi zeedola enokufikelela kwisiqithi saseLa Palma kwiiCanary Islands.
Njengeenkcukacha, xelela ukuba ngaphandle kokuba iiCanary Islands zithathwa njengeyona ndawo yesibini kwihlabathi ukubamba iteleskopu yezi mpawu, emva kweMauna Kea, inyani kukuba iprojekthi kufuneka ijongane neengxaki ezininzi ezinje isenokuba yi Ukuphulukana nokuphakama kwemitha engama-2.000 , njengoko sele kubhengeziwe, izakuchaphazela ubukhulu becala ukusonjululwa kwamanqanaba kunye ne-infrared wavelengths efunekayo yokujonga amaziko egalactic. Ngenxa yezi ngxaki, abo banoxanduva lwe-TMT abakaqinisekisi ngendawo yabo entsha kwi-100% kuba kufuneka kuqala Bala iindleko kunye neendleko olu tshintsho luya kubandakanya.
Más información: TMT
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Te knoloji » ISpain inokunyulwa ukuba ibambe i-TMT, eyona iteleskopu inamandla emhlabeni
Awudingi ukubhekisa kumfundi rhoqo. Nge "comment" kulungile.
Phambi konogumbe, bonwabela mahala i-documentary ebaliswa nguLeonardo DiCaprio